Nagarik Shukrabar - मनोरञ्जन
मङ्गलबार, ०४ कार्तिक २०७७, १२ : १९
कमेडी च्याम्पियन: 'स्टेज मिस भइरहेकाे छ'
मलाई आउट हुन्छु जस्तो त लागेको थिएन। जित्छु नै भने भन्ने लागेको थियो। लाष्ट हप्ता चाही अलिक कमजोर भयो। त्यसमा मलाई हल्का शंका थियो। यति नै चाँडो आउट हुन्छु भन्ने चाही थिएन। टप तीन या चारसम्म अवस्य पुग्छु भन्ने थियो तर बेलैमा आउट भइयो।
प्रियंका कार्की गएको साता मिडियाभरि छाइरहिन्। कारण, उनको ब्याचलर पार्टी नै थियो।
हट नै देखिनुपर्ने निकितालाई
सन २०१७ मा मिस नेपाल बनेकी निकिता चाण्डकको फिल्म खेल्ने रहर पूरा भएको छ। विराज भट्टको ‘साङ्लो’मा अभिनय गरेपछि उनी हट हट तस्बिर खिचाउन व्यस्त छिन्।
साइडमै ठीक सलोन
फिल्म ‘ए मेरो हजुर’को सिरिजमा उनी मुख्य हिरोमा कहिल्यै परेनन्। उनलाई साइड हिरोमा खेलाएर मुख्य हिरोमा कि त नयाँ कि त स्टारलाई नै हिरो बनाउने गरेकी छन्, निर्देशन झरना थापाले।
प्रदीपलाई सधैँ चिन्ता र डर
महँगो लगानीमा निर्माण भनिएको फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को हालै छायांकन सकिएको छ।
फिल्ममा भन्दा म्युजिक भिडियोमा बढी देखिदै आएकी अभिनेत्री वर्षा राउत फिल्मविहीन जस्तै बनेको लामै समय भइसक्यो।
जसिताको अनमोल जोडी
जसिता गुरुङले ‘लिलिबिली’ र ‘लभ स्टेसन’पछि कुनै फिल्ममा अभिनय गरेकी छैनन्।
छुल्ठिमको भ्यालेन्टाइन चिन्ता
भ्यालेन्टाइन्स डे आउन निकै समय बाँकी छ तर अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङलाई भने प्रेम दिवस अहिले नै आइसक्योजस्तै भएको छ।
दुई वितरकको भाले जुधाई : उदाङ्ग भयो अव्यवसायिकता !
‘पोइ प-यो काले’को वितरण अधिकार पाएका दुई वितरक गोपाल कायस्थ र करण श्रेष्ठबीच गएको साता झण्डै हात हालाहालको स्थिति आयो। कुरा फेसबुकसम्म चुहियो र मामिला अदालतसम्म पुग्ने धम्की दिइएको छ तर हाललाई यी दुई वितरकबीच कुरा नचर्काउने भनी सहमति भएको छ।
प्रशंसकहरुको गाली ओइरिएपछि आस्थाले सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरुप्रति लक्षित गर्दै टिप्पणी गरेकी थिइन्। ‘डण्ठा बोक्नेलाई डण्ठे, बन्दुक बोक्नेलाई बन्दुके, गाउनेलाई गाइने र नाच्नेलाई नर्तकी भनेजस्तै आफूले बोलीचालीको शब्द प्रयोग गरेको’ बताएकी थिइन्।
‘२ नम्बरी’मा लागे दीपेन्द्र
दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा ‘२ नम्बरी’ फिल्म बन्ने भएको छ। फिल्ममा दयाहाङ राई, पल शाह, वर्षा राउत, बुद्धि तामाङलगायतका कलाकार रहनेछन्।
नेपाल आइडल: भोटका लागि प्याटर्न नै चेन्ज
नेपाल आइडल सिजन ३ को गाला राउण्डमा टप १२ जना प्रतिस्पर्धी पुगिसकेका छन्। टप १२ मा पुगेसँगै भोटिङ राउण्ड खुलिसकेको छ।
कमेडी च्याम्पियन: भाइरल बनेका सुमन
शृंखलाले नियमित रुपमा क्षितिजको प्रस्तुति हेर्ने गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले क्षितिजका बारेमा लेखिएका युट्युब कमेन्ट अझ रमाइलो हुने पनि बताएकी थिइन्।
रोडिज् : लाहुरे टिमको अग्रता
हिमालय रोडिज् यतिबेला जर्नी राउन्डमा पुगेको छ। यस राउन्डमा रोडिज्ले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई सुन्दर शहर भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा दौडायो।
२८ वर्ष लामो अभिनय यात्रामा कति गसिपको शिकार बनिन् होला निर्देशक दीपाश्री निरौला। त्यो लेखाजोखा कसैले राखेका छैनन्। गसिपै त हो ! त्यसैले कसले पो राख्ला ! यही र यस्तै गसिपकै कारण पनि उनी पर्दाबाट हराए पनि अखबारका पानामा हराउन पाइनन्।
रेखाको नयाँ काम
सबिर श्रेष्ठ र रेखा थापा दुःखका साथी हुन्। फिल्म निर्देशनमा सहायक रहँदा रेखाको फिल्मी संघर्ष शुरु भएको थियो। यत्तिको लामो समयमा यी दुईको केमेस्ट्री निकै मिल्छ। त्यसैले त जब जब रेखालाई संकट पर्छ, उनी सहयोगका लागि हरदम तयार भइहाल्छन्।
एक समय थियो, सौगात मल्ल आफ्नो प्रेम जीवनका बारेमा खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनथे। झन् आफ्ना प्रेमिकासँग हातमा हात, साथमा साथ लिएर अघि बढ्न त मरेझैँ हुन्थ्यो।
पुष्पको कमलो मन
यो फिल्म उद्योग हो। कसैले कसैलाई सहयोग गर्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ लेनदेन हुन्छ नै ! संसारै स्वार्थमा चलेको छ भने त झन् फिल्म उद्योग यसबाट टाढिने कुरै भएन !
प्रियंकाको ब्याचलर पार्टी
गएको एक वर्षदेखि फिल्म उद्योगका पण्डितहरु प्रियंकाको बिहे कहिले होला भनेर प्रतीक्षारत थिए। प्रियुष्मान बुझ्नु भएन ? प्रियंका प्लस आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी !
सविन राईको गनगन
हालै हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डमा सामूहिक रुपमा सविन राई एन्ड फारोले अवार्ड जित्यो। तर अखबारमा भने सविन राईले अवार्ड हात पारे भन्ने समाचार आयो।